Bashaqekile kuminza ithwasa nogobela - Ilanga News
Home Izindaba Bashaqekile kuminza ithwasa nogobela
USASHAQEKILE umphakathi waseNgwempisi, eMandawe, ngesigameko sokuminza kukagobela nethwasa lakhe kade beyogeza empophomeni yakule ndawo ngoLwesine. Abashonile nguNkz Andiswa Mkhize (29) nethwasa lakhe, uNkz Barba Mkhize (40). Ngesikhathi ILANGA lihambele umndeni, wehluleke ngisho ukukhuluma uNkz Makhosi Mokoena, obeshade nogobela. Uthe usadidekile, ucela ukunikwa isikhathi. “Empeleni nami kangazi ukuthi kwenzekeni, bengingekho ngiseCape Town ngafonelwa sekuthiwa mangibuye ekhaya sekwenzeke lo monakalo,” kusho yena ngamafuphi.
UNkz Ntombikhona Ngcobo, ozibize ngomngani omkhulu kagobela, utshele ILANGA ukuthi ngoLwesithathu bebehamba naye beyogeza ePinetown, okuthe ngoLwesine ngezithuba zo-06h00, bayogeza kulena esendaweni yena engasekho. “Namanje kangazi ukuthi yini eyenze baye kuyona ngoba kuyaziwa ukuthi iyingozi. “Kangikholwanga sengitshelwa ukuthi kabasaphumanga. “Kuthe uma ngifika khona, obehamba nabo wathi bangenile emanzini kwaba sengathi kukhona okudonsa ithwasa. “Kuthe uma bebona ukuthi kukhona okungahambi kahle, wazama ukuthi adonse umakhosi Mkhize (ugobela), obeseduze kwakhe ukuze baphumele ngaphandle, kodwa kuthe sebezophuma, kwaba khona into engathi iwugesi emubambayo, wabona ukuthi bazocwila bobabili uma engamdedeli. “Ugcine ngokumdedela wawela ngaphandle, kodwa izinyawo zasala emanzini, waphelela khona lapho.
“Kasazi ukuthi kwenzekeni kubona ngesikhathi bengene empophomeni, engikubonile kumakhosi Mkhize, ngoba ngisondelile, wukuthi ubengasambethe ngezansi, emakhaleni kuphuma igazi kuhle komuntu oqhumile. “Ibuhlungu le nto eyenzekile, kuhambe abantu abebephila, abebenomoya omuhle, bekwazi ukuphila nabantu. “Umakhosi ubephilelana nabantu yize ebephila kahle. Uma ehlangana nawe ehamba ngemoto, ubenganqeni ukuma abingelele abuze nempilo, uma uya ngalapho eya ngakhona akugibelise.”Bekungabantu abasha lapha endaweni, kodwa bafike saphilelana,” kusho uNkz NgcoboUmndeni uthi okwamanje kawukazi ukuthi uzofihla nini njengoba usalinde udokotela uzohlinzam izidumbu.Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uqinisekisile isigameko, wathi kuvulwe idokodo lophenyo ngokufa kwabantu.
Previous articleKucishe kwaphuma isidumbu ngesithembu sowesifazane
Next articleKusolwa ‘ukungalalelwa ekhaya’ ngokuzibulala kukasomabhizinisi